HORDHAC: Barcelona vs Valencia - Barca Oo Doonaysa Guul Ay Hoggaanka Ugu Dhawaato, Shaxaha Macquulka Ah & Xogta Kulanka - GOOL24.NET
HORDHAC: Barcelona vs Valencia – Barca Oo Doonaysa Guul Ay Hoggaanka Ugu Dhawaato, Shaxaha Macquulka Ah & Xogta Kulanka
Barcelona ayaa isku dayi doonta inay kusoo laabato wadada guulaha kulanka ay caawa gegida Camp Nou kusoo dhawaynayso dhigeeda Valencia.
Barca ayaa hadda booska sagaalaad kaga jirta kala sarreynta horyaalka La Liga kaddib markii ay 12 dhibcood kasoo heleen 7-dii kulan ee ugu dambeeyay, Valencia ayaa booska siddeedaad joogta iyaga oo la dhibco ah Barca.
Guuldarradii 2-0 ka ahayd ee ay kala kulmeen Atletico Madrid kahor kulamadii qaramada ayaa la filayay inuu noqdo kulankii ugu dambeeyay ee Ronald Koeman balse tababaraha Dutch-ka ah ayaa shaqadiisa sii xejistay oo markale kooxda laylin doona.
Barcelona ayaa liiska xiddigaha kooxdeeda uga qayb qaadanaya kulankaas kusoo wada dari karta Sergio Aguero iyo Ousmane Dembele oo aan midkoodna kooxda metelin xilli ciyaareedkan maadaama oo ay dhaawacyo mudo dheer ah qabeen.
Martin Braithwaite iyo Pedri ayaa labaduba hubaal maqnaan doona, sidoo kale Ronald Araujo ayaa ku seegaya ciyaarta dhaawac muruqa ah oo kusoo gaadhay xulkiisa Uruguay.
Ansu Fati, Luuk De Jong, Jordi Alba iyo Eric Garcia ayaa dhammaantood kusoo bilaaban kara, Koeman ayaa la filayaa inuu isbedelo ku sameeyo shaxdii uu Atletico Madrid guuldarrada kagala kulmay balse Gavi ayaa loo badinayaa inuu markale kusoo bilaaban doono.
Dhinaca Valencia waxa taam buuxa kulankan u noqday Jose Gaya iyo Carlos Soler oo dhaawacyo ku maqnaa balse waxa wali dhaawac qaba Cristiano Paccini halka Omar Alderete uu ganaax ku maqnaanayo.